प्रचण्डसहित चार नेताले सय बढी पत्रकार बोलाएर भने- पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छ :: Setopati
'देशभित्रका,देशबाहिरका प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट पार्टी एकतावद्ध रहिरहोस् भनेर चाहँदैनन्। उनीहरू छिटोभन्दा छिटो विभाजित होस्, क्षतविक्षत होस् भन्ने चाहेका छन्,' उनले भने,'उनीहरूले गठबन्धन गर्दाका दिनदेखि असफल पार्न कोसिस गरे। चुनावपछि पनि दुईवटा पार्टीको एकता नहोस् भने। हामीले प्रतिवाद गर्दै एकता गर्न सफल भयौं।'
'प्रधानमन्त्री स्वंयले पहल गरेर एमाले दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा जानु पार्टी एकताको पक्षमा भएको हुन्छ त? त्यसले पार्टी एकता बनाइराख्न भूमिका खेलेको भन्ने देखाउँछ त? बिल्कुल देखाउँदैन। यो पनि एकताको पक्षमा होइन, फुटको पक्षमा हो भन्ने त्यसले राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ,' उनले भने,'पार्टी बैठक चलिराखेको छ। युवाहरूलाई आह्वान गरेर देशभरि जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लाग्छ। नक्सा छापिनु पर्‍यो भनेर जसले भने, पार्टी कमिटीबाट निर्णय गराए उनीहरू दलाल हुने? अन्तिममा सचिवालयको बैठकमा नीति कार्यक्रममा हाल्नै पर्‍यो भनेपछि हाल्नेचाहिँ महान राष्ट्रवादी?,'
'यो सरकारले अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। विकास, निर्माण गर्ने हो भने यो समयमा नेतृत्व लिन सकिन्छ। दुई-चार महिना, एक वर्षमा केही गर्न सकिँदैन। अढाइ वर्षमा जति पनि गर्न सकिन्छ,' उनले भने,'हामीले तीनवटा बजेट ल्यायौं एउटा बजेटमा राम्ररी तयारी भएन कि भनेर शंकाको लाभ दिन सकिन्छ। तर, तीन वटा बजेट आइसक्यो, खै अग्रगति, खै समाजवादमा जाने कार्यक्रम? समाजवादको के नीति आयो?'
'समाजवादको दिशातर्फ जाने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हो यो। प्रधानमन्त्री अल इन अल होइन। हामी नयाँ अवस्थामा थियौं। तर केपी ओलीले पुँजीवादी ढाँचा र ढर्रामा सरकार चलाउनु भयो,' उनले भने,'पार्टीले उम्मेदवार बनायो, पार्टी संसदीय दलले प्रधानमन्त्री बनायो तर संसदीय दल र पार्टी उहाँका निम्ति भर्‍याङमात्रै बने। उचाइमा पुग्ने भर्‍याङ बनाउनु भयो।'
'म सबै हो भन्ने मान्यताले एकीकरणको काम पुरा हुन सकेको छैन। मूलभुत रूपमा काम भएको छ, सम्पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने,'पार्टी विधि र नीतिबाट चल्छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य कमिटी प्रणालीअनुसार चल्नुपर्छ।'
'सहमति र बहुमत जे पनि हुन सक्छ। आफ्नै कमिटीका मान्छेहरूले मान्दैनन् भने जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। पार्टीको बैठक नियमित बस्नुपर्छ। पार्टी कागजमा सीमित भएको छ,' उनले भने,'आफू खुसी असक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको छ। पार्टीलाई बिसर्जनमा पुर्‍याइएको छ भने सरकारको काममा पार्टीसँग सल्लाह गरिएको छैन।'
'यो पद र सुविधाको लडाइँ होइन। पार्टीलाई गतिशील बनाउले लडाइँ हो,' उनले भने, 'जनतामा आशा र विश्वास जगाउने लडाइँ हो। बहुमतले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्‍यो, त्यही छलफल गर्नुपर्‍यो।'